Wenger; “PSG way sii wadi doonaan guulahooda Faransiiska laakiin waxay tebi doonaan Ibrahimovic” – Gool FM
Wenger; “PSG way sii wadi doonaan guulahooda Faransiiska laakiin waxay tebi doonaan Ibrahimovic”
Haaruun September 13, 2016
(London), 13 Sebt 2016 –Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa isagoo ka hadlayay shir jaraa’id ka hor kulanka caawa ay Arsenal la ciyaarayso PSG ee Horyaallada Yurub waxa uu ka hadlay awoodda kooxda Paris Saint-Germain ee Faransiiska.
“PSG way sii wadi doonaan guulahooda Horyaalka Faransiiska, laakiin waxay khasaariyeen laacib weyn oo magiciisa la yiraahdo Ibrahimovic” ayuu yiri tababaraha Faransiisku.
“Waxa uu ahaa Hoggaamiyaha iyo Kabtanka Naadiga, waxa uu sare u qaadi jiray hamiga kooxda, aad ayayna u adag tahay in la qiyaaso inta aad u darsan karto markaad weyso laacib sidaasi u qiimo badan” ayuu sii raaciyay Wenger.
Tababare Wenger waxa uu sheegay in PSG haatan ay soo iibsadeen tababare cusub, isla markaana ay doonayaan in ay qaabkoodii hore beddelaan oo ay cagahooda mar kale ku istaagaan.
Zlatan Ibrahimovic ayaa xilli ciyaareedkan markii uu dhammaaday qandaraaskiisii PSG waxa uu u wareegay kooxda Manchester United ee Waddanka Ingiriiska.
CHAMPIONS LEAGUE (Group C): Barcelona oo si xun u ihaaneysatay Celtic, Messi oo saddexleey ka kacay..(Iyo kulankii Man City oo baaqday)+SAWIRRO
CHAMPIONS LEAGUE (Group A): PSG iyo Arsenal oo dhibcaha ku heshiiyay iyo Basel oo mari waysay Ludogorets Razgrad...+SAWIRRO